Duulli waraanaa gama kaabaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni IWEHAT murtiitti ennaa dhiyaatan qofa jechuu dhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru.
Kunis guyyoota murtaa’e keessatti xumuramuu danda’a jechuu dhaan miseensa koree hoji raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi hooganaan waajjirichaa obbo Binnaalf Anduaalem VOAf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne IWEHAT, tooftaa dhaan boodatti deebi’uu isaa ibsaa jira jedhan. Obbo Binnaalf yaadawwan akkasii fi ripxe loltummaan yeroo dheeraaf turu jiraachuu mala tilmaama jedhu garuu fudhatama dhabsiisaniiru.
Ganiinsa biyyaa irratti kan bobba’e gareen IWEHAT, jalqabuma irraa ibsa akkamii kennaa akka turan martinuu quba kan qabu natti fakkaata. Duulli sun erga jalqabee qabee adda waraanaa mara irratti haleellaa irratti raawwatameef injifatamuu isaan mudate, yeroon itti simatan jira jechuun hin danda’amu. Dhugaan lafa jiru garuu kana.
Hanga dhumaatt, Maqaleen to’annaa jala hanga oolutti ibsi isaan kennaa turan, Axumn deebisnee qabanne, bakka akkanaatti haleellaa raawwanne, murna waraanaa hagasii barbadeessine, kan jedhu uumanii odeessaa turan.
Kun ta’e jedhee uummata dogoggorsuu fi hawaasi addunyaas waraanichi akka itti fufee jiru, isaan immoo injifannoo gonfachuun itti fufuu isaanii fakkeessuuf kan afarfame olola sobaa ti. Yeroo ammaa humni isaanii bittinnaa’ee, lolli waraanaan geggeessamu guutummaan akka dhaabatu ta’eefa. Kan hafe hojii poolisii ti. Poolisiin kanneen dhokatanii jiran qabee murtiitti dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhan.
IWEHAT shorokeessummaan akka himatamu waamichi dhiyaataa jiraachuu kan tuqan hoogganaan waajjirichaa paartiin biyya bulchu badhaadhinaa murtii dhumaa irra akka hin ga’in ibsaniiru.
Gama biraatiin waaggaa 30 waan ta’uuf ka’aa kan gure gaaffiin eenyummaa fi bulchiinsa daangaa karaa seeraan deebii akka argatu koreen hoji raawwachiistuu paartii badhaadhinaa murtteessuu isaas itti gaafatamaan waajjirichaa ibsanii jiran. Koreen hoji raawwachiistuu Paartii badhaadhinaa Sadaasa 25 fi 26 wal ga’ii guyyaa lamaaf geggeessaa ture xumuree jira jechuu dhaan Eskinder Frew gabaaseera.
Dhaabbiileen Barnootaa Ol’aanoo Barattoota Bara Kana Eebbifaman Simachaa Jiran